Acacia Rigidula (အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ) - Hello Sayarwon
Acacia Rigidula (အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Acacia Rigidula (အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ)
Acacia Rigidula (အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ) ကဘာလဲ။
အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Acacia Rigidula ကို အောက်ပါအခြေအနေတွေအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
Acacia Rigidula ကို အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပိုမိုသိရှိဖို့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Acacia Rigidula ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေက Acacia Rigidula မှာ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဓါတုပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနဲ့ အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Acacia Rigidula ကိုပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် ကြေငြာထားတဲ့ ထုတ်ကုန် အတော်များများမှာ စိတ်ကြွစေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ beta-methylphenethylamine (BMPEA) ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Acacia Rigidula ကို အသုံးမပြုခင် ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။ အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Acacia Rigidula နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ၊ အခြားဆေးတွေ၊ အခြား herbal တွေနဲ့ မတည့်ရင်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ အစားအသောက်၊ ဆိုးဆေး၊ ထပ်ထည့်ဆေး၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုရှိရင်ဒီ Herbal supplement အတွက် စည်းမျဉ်းတွေဟာ ဆေးတွေရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေလောက် တင်းကျပ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အာနိသင်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် လေ့လာမှုတွေ ပိုမိုလိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒီ Herbal supplement ကို မသုံးစွဲခင် ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို ဒွန်တွဲစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Acacia Rigidula အသုံးပြုခြင်းကို စီစဉ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီ နှစ်ပတ်အနည်းဆုံးကြိုပြီး ရပ်သင့်ပါတယ်။
အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Acacia Rigidula ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးတုန်ခြင်းလူတိုင်းကတော့ ဒီလိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ကြုံတွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထဲမှာ ဖေါ်ပြမထားတဲ့ ဆိုးကျိုးအချို့လည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Acacia Rigidula ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Acacia Rigidula ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အကေးစီးရား ရစ်ဂီဒူလာ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Acacia Rigidula ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Acacia rigidula bark extract
Acacia rigidula ဆေးတောင့်
Acacia Rigidula. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1411-acacia%20rigidula.aspx?activeingredientid=1411&activeingredientname=acacia%20rigidula. Accessed March 11, 2017.
ကျန်းမာရေးညီအစားအစာဆိုသော်လည်း ကယ်လိုရီမြင့်နေသည့်အစာ (၈) မျိုး
ကျစ်လစ်သေးသွယ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်လေး ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား
ဗိုက်က အဆီတွေကို တာတာ့ပြနိုင်ဖို့ သောက်သင့်တဲ့ ဖျော်ရည်များ
ညဘက်အချိန် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ခြင်း နည်းလမ်းများ